Taekwondo- RNS”Live Challenge”: nandray anjara, Randrianisa Tiavo, tompondakan’i Frantsa | NewsMada
Taekwondo- RNS”Live Challenge”: nandray anjara, Randrianisa Tiavo, tompondakan’i Frantsa
Na eo aza ny tsy fahatanterahan’ny fifaninanana RNS (Ren­contre Nationale Sportive) saika hatao tany Cergy, Frantsa, ny 10 hatramin’ny 13 Avrily izao, mitady hevitra hatrany ny mpikarakara hanampiana sy hampiakarana ny moralin’ny mpiray tanindrazana izay miatrika ady mafy ankehitriny. Misy araka izany, ny horonantsarin’ireo atleta sy mpanao fanatanjahantena malagasy mila ravinahitra any ivelany, antsoina hoe “Live Challenge”, izay manome soso-kevitra ary manoro amin’ny fitaizam-batana amin’izao fihiboana izao. Isan’ny nandray anjara tamin’izany, Randrianisa Tiavo, tompondakan’i Frantsa sy ompondakan’i Eoropa, taranjataekwondo.
Nozarainy tao anatin’ny horonantsariny, ny fomba fitaizam-batana “Full Body” sy “Fight Spirit”. Tsiahivina, vao 20 taona monja ity tovovavy ity no izao miditra an-tsehatra amin’ny fankaherezana ny mpanao fanatanjahantena izao, amin’ny alalan’ny fanaovana fampihetseham-batana, indrindra amin’izao fotoana fihiboana izao.
Ankoatra an’i Tiavo, mpanao fanatanjahantena telo miana­dahy no efa nandray anjara tamin’ity “Challenge” ity ny herinandro lasa teo. Isan’izany Andriamasilalao Lucas, mpilalao tenisy, i Stéphanie Hoche, mpanazatra ara-panatanjahantena ary Ramehirison Dimby, mpanao “marathon”. Ny “Cardio”, “Abdos & Fessiers” ary ny fanomanana mialohan’ny hazakazaka no nifampizaran’izy ireo tao anatin’ny horonantsary izay hita ao amin’ny pejy fesiboky ny RNS.